Onye Ogbuo Ọwara Ọsọ Akụgbuola Otu Nwaanyị n'Ọnịtsha - Igbo News | News in Igbo Language
Aug 13, 2020 - 14:52 Updated: Jan 28, 2021 - 14:53
Ọ bụ nnọọ ihe ịgba anyammiri n'ụtụtụ ụbọchị Wenezdee, dịka dịka otu onye ogbuo ọwara ọsọ jiri ụgbọala kọtuo otu nwaanyị na-agara onwe ya n'Ọnịtsha.
Dịka ozi e wepụtara site n'aka onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ụlọọrụ 'Federal Road Safety Corps, FRSC' (ngalaba steeti Anambra) bụ Maazị Paschal Anigbo siri kọwaa, ya bụ ihe mberede okporo ụzọ bụ nke mere n'isi njikọ ụzọ Okpoko dị n'Ọnịtsha, na mpaghara ụzọ awara-awara ahụ siri Enugu gaa Ọnịtsha.
O mere ka a mara na ya bụ ajọ ihe mberede dapụtara n'ihi ịgba oke ọsọ, ma bụrụkwa nke mere n'elekere asatọ nke ụtụtụ oge otu onye na-anya ụgbọala jiri oke ọsọ wee kụtuo otu nwaanyị n'agara onwe ya n'ụzọ, ma jirikwa oke ọsọ fee ka nnụnụ, larie, nke na o nweghịzịkwa onye hụrụ ya anya ọzọ ma ya fọdụzie ịma ihe ọbụla banyere ya maọbụ ụgbọala ya.
Akụkọ kọrọ na ndị nọ nso oge ya bụ ihe mere gbagara ebe ahụ ozigbo ma buru nwaanyị ahụ buga ya ụlọọgwụ Toronto dị n'Ọnịtsha ahụ, bụ ebe dọkịta nọrọ wee lelechaa ya ahụ, wee kwuo na ụkwa a na-apị, na mkpụrụ adịghị ya, nke pụtara na ya bụ nwaanyị alaala mmụọ.
Ka ọ dị ugbua, a dọnyezịrị ozu nwaanyị ahụ n'ụlọ nchekwa ozu dịkwa n'otu ụlọọgwụ ahụ.
N'akụkọ dịkwa ka ibe ya, oke ihe mberede ọzọ dapụtakwara n'akụkụ otu ọdụ mmanụ ụgbọala dị n'Ihiala, n'okpuru ọchịchị ime obodo Ihiala nke steeti Anambra, na mpaghara ụzọ awara-awara ahụ siri Ihiala gaa Ọnịtsha.
Ya bụ ihe mberede okporo ụzọ bụ nke dapụtara oge ụgbọala abụọ — 'Toyota Hiace' (nwere akàrà CAL15XJ) na 'Actros Tanker' (nwere akàrà FGG176YU) kwòkọrọ isi ọnụ, ma bụrụkwa nke metụtara mmadụ iri na ise (ụmụnwnwoke isii na ụmụnwaanyị iteghete) nọ n'ime ụgbọala ahụ oge ya bụ ihe mere.
Mmadụ iri n'ime ha (ụmụnwoke anọ na ụmụwaanyị isii) nwetàra nnukwu mmerụahụ n'ụdị dị iche iche, oge ya bụ ihe mberede mere; mana o nweghị onwe ọbụla tụfuru ndụ ya.
Ndị ahụ bụzị ndị e buuru wee gaa ụlọ ahụ ike 'Our Lady of Lourdes Hospital Ihiala' maka nlekọta na inye ha ọgwụgwọ.
N'okwu ya banyere nke ahụ, onyeisi ụlọọrụ FRSC na steeti Anambra, bụ Maazị Andrew A. Kumapayi kasìri ezinụlọ onye nke ha nwụrụ obi ma kpee ka Chineke nabata mkpụrụobi nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ ma mekwa ka o zuru ike na ndokwa. O kpekwara ka ndị nke nwetara mmerụahụ gbakerechaa nke ọma n'oge adịghị anya.
N'Anambra, A Malitela Ịkụtùsi Ihe Iwu Akwadoghị A Rụrụ n'Ala Gọọmenti